भक्तपुर, साउन १५ । महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमीको प्रहरी टोलीले सोमबार लागूऔषधसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सूर्यविनायक नगरपालिका–५ का ५१ वर्षीया पद्मा राणा, पर्सा धोबनी गाउँपालिका–२
होमस्टे एशोसिएसन नेपाल प्रदेशनं ३ को भेला सम्पन्न, बाबुराजाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । साउन १४ । होमस्टे एशोसिएसन नेपाल (HOSAN) प्रदेश नं ३ को भेलाले होमस्टे नेपाल, कृर्तिपुरका सञ्चालक बाबुराजा महर्जनको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन
लोक दोहोरी गायीका माथी खुकुरी प्रहार, अल्का अस्पतालमा उपचार हुंदै
काठमाडौं । साउन १४ । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरि गीत प्रतिष्ठान नेपालकी संस्थापक कोषाध्यक्ष सिता थापा खुकुरी प्रहारबाट घाइते भएकी छन् । गायीका थापालाई आफ्नै घरमा जेठानीले
मन्त्री परिषदको बैठक सम्पन्न, केहि सचिबको सरुवा र बढुवा , के के भयो निर्णय ?
रबिन थपलिया । काठमाडौं । साउन १४ । मन्त्रीपरिषदको बैठक केहिबेर अघि सक्कीएको छ । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाका अनुसार मन्त्रीपरिषदको बैठकले हाल
संसद््मार्फत सहमति कार्यान्वयन अगाडि बढ्दै
–विष्णु नेपाल काठमाडौँ, साउन १४ ।“सार्वभौम संसद् र संसद्को प्रक्रियामार्फत सरकार र प्रा डा गोविन्द केसीबीचको सहमति टुङ्गोमा पुग्नेछ, मलाई विश्वास छ, जननिर्वाचित प्रतिनिधिले सहमतिलाई अनुमोदन गर्नुहुनेछ,” नेकपा संसदीय
बीमा विधेयक–२०७५ संशोधन गर्न माग
काठमाडौँ, साउन १४ । संघीय संसद्मा दर्ता गराएको बीमा विधेयक–२०७५लाई सरकारले संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बीमा सर्भेयर संघ नेपालले यहाँ आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त विधेयक संशोधन
डिएलएको नेतृत्वमा अधिकारी
चितवन, साउन १४ । नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियशन (डीएलए) को १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन योगेन्द्रबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा ४३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै आज गैँडाकोटमा सम्पन्न भएको छ । अधिकारीले
–कुमार चौलागाई काठमाडौँ, साउन १४ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकूद नीति– २०६७ परिमार्जनको तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले गत जेठमा सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने संयोजक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयका
काठमाडौँ, साउन १४ । भावी प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय हुन सकेन । संसदीय सुनुवाइ समितिको आज बसेको बैठकले थप छलफल गर्नु आवश्यक
–भीष्मराज ओझा काठमाडौँ, साउन १४ । संघीय राजधानीका ठूला अस्पतालले नै फोहर पानी प्रशोधन नगरी सिधै सार्वजनिक ढलमा मिसाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न मन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ, साउन १४ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग नेपालका लागि इजरायली राजदूत बेन्नी ओमेरले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जामन्त्रालयमा आज भएको भेटवार्तामा द्धिपक्षीय हितका विषयमा
वार्षिक परीक्षामा संलग्न व्यक्तिको पारिश्रमिकमा वृद्धि
काठमाडौँ, साउन १४ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफू मातहतमा सञ्चालित वार्षिक परीक्षामा संलग्न शिक्षक, कर्मचारी तथा सुरक्षा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा संशोधन गरेकोे छ । केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको सिफारिसअनुसार यही साउन २
काठमाडौँ, साउन १४ । प्रेस चौतारी नेपालले बुधबार साप्ताहिकका सम्पादक उज्ज्वल पहाडीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने व्यक्तिको पहिचान गरी कारवाही गर्न माग गरेको छ । आज प्रेस चौतारीका महासचिव राजेश
–रमेश लम्साल काठमाडौँ, साउन १४ । शेयरको मूल्यांकन गर्ने कम्पनी इक्रा नेपालले आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनीलाई ‘ग्रेड’ पाँच दिएको छ । सो कम्पनीले यही साउन १७ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई
दमक, साउन १४ । झापाको कमल गाउँपालिका–५ स्थित पाडाजुंगीमा आज बिहान माइक्रो बस र स्कुल बस जुध्दा पाँच विद्यार्थी घाइते भएका छन् । इलाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार बा ५
बिदेश जान काठमाडौं आएका युवक नयाँबसपार्क मित्रनगरको सडकबाटै लुटीए, लुटपाट गर्नेको खोजी जारी
काठमाडौं । साउन १४ बिदेश जान काठमाडौं आएका एक युवकको साथबाट अपरीचीत समुहले एकलाख रुपयाँ लुटेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका २६ मित्रनगरस्थित सडकबाट बझाङ भलारा गाउँपालिका १
बेसीशहर, लमजुङ, १४ साउन ः घर छोडेर सम्पर्कविहीन भएको ४७ वर्षपछि एक वृद्ध घर फर्कनुभएको छ । बेँशीशहर नगरपालिका–२ भकुण्डेका प्रेमबहादुर खड्का ४७ वर्षपछि घर फर्किनुभएको हो
बाँके, १४ साउन (रासस) ः नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक बसपार्क निर्माणमा चरम लापर्बाही देखिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–४, गणेशपुरमा निर्माणाधीन अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण कार्यमा निकै सुस्त र चरम लापर्बाही
स्मरण शक्ति बढाउने 10 तरिकाहरू
काठमाडौं साउन १४. हरेक मान्छे आफ्नो स्मरण शक्ति बढाउन चाहन्छन् । तर हाम्रो स्मरण शक्ति असिमित रहेको कूरा बिभिन्न वैज्ञानिकहरू बताउछन् । हाम्रो स्मरण शक्ति हाम्रै दैनिक
भक्तपुर, साउन १३ । भूकम्पपछिको ऐतिहासिक सम्पदाहरुको पुनःनिर्माणका बारेमा काठमाडौँ उपत्यकाका ऐतिहासिक सम्पदा रहेको पुराना पाँच नगरपालिकाहरुको विशेष छलफलसहित चारबुँदे निर्णय गरेका छन् । आज इतिहास मै पहिलो पटक नगरपालिकाबीच
गौशाला, साउन १३ । महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकाको आज दिउँसो दोस्रो गाउँपरिषद् भइरहेका बेला परिषद्मै कुर्सी हानाहान भएको छ । राजपा नेपालका अध्यक्षसहित बहुमतको स्थानीय सरकार रहेको पिपरा गाउँपालिकाको परिषद्
पोखरा, साउन १३ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोेकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ कानूनको निर्माणमा सरकार लागेको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीद्वारा सञ्चालित प्रजातन्त्र सेनानी दयाशंकर पालिखे स्मृति
सडकमा भएको करोडौं लगानी बर्खे भेलसँगै बग्यो
–सन्तोष गौतम बाबियाचौर, म्याग्दी, साउन १३। म्याग्दीका ग्रामीण सडकमा भएको लगानी खेर गएको छ। करोडौं लगानी गरेर हिउँदमा ट्र्याक खोलिएका र स्तरोन्नति गरिएका सडकमा बर्खासँगै सवारी अवरुद्ध भएका छन्
– अच्युत रेग्मी काठमाडौँ, साउन १३ । विस २०७५ असार ३ गते धादिङस्थित नृपेश्वर आयल स्टोर प्रालिले मापदण्डभन्दा घटी पेट्रोलियम पदार्थ उपभोक्तालाई विक्री गरेर उपभोक्तालाई ठग्यो । विस २०७५जेठ २०
चिकित्सा शिक्षा ‘अंशलाई उचालेर समग्रलाई छाडियो’
– रमेश लम्साल र सिबी अधिकारी काठमाडौँ, साउन १३ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षामा एमबिबिएसको मात्रै कुरा गरी अन्य विषयलाई छाडेर गलत प्रचलन अगाडि बढाउन खोजिएकामा सांसदले सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण
Pages 248 : You are at page 104 of 248